Madaxweyne Waare oo beeniyay in Madaxweynayaashii hore ee dalka loo diiday iney ka dagaan Garoonka Magaalada Beledweyne. – Radio Muqdisho
Madaxweyne Waare oo beeniyay in Madaxweynayaashii hore ee dalka loo diiday iney ka dagaan Garoonka Magaalada Beledweyne.
Madaxweynaha Dowladd gobaleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo shir jaraaid u qabtay warbaahinta ayaa beeniyay warar lagu baahiyay Baraha bulshada oo ku aadan in wafdi ay hogaaminayeyn Madaxweynayaashii hore e dalka laga hor istaagay inay u safraan magaalada Baladweyn ee xarunta gobalka Hiiraan.
Madaxweyne Waare ayaa tilmaamay inuu la xiriiray masuuliyiinta islamarkaana uu ku wargeliyay warbixin soo gaartay oo tilmaameysay In garoonka magaalada Baladweyn ay ka jirto cilado farsamo oo ay sababeen fatahaadaha ka dhacay magaalada, tasoo masuuliyiinta ay ka dhaga adeegeen isla markaana ay qaateen go’aan qaldan oo naftooda halis gelin karay.
Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhinaca kale ka hadlay halka uu marayo gurmadka loo fidinayo dadka ay dhibaatadu kasoo gaartay fatahaada iyo waxa maamul ahaan uga qorsheysan inay ka gaashaantaan waxyeeladan soo laab laabatay ee fatahadaha.
Wasiirka Maaliyadda oo ka warbixiyey Waxyaabihii u qabsoomay Wasaaradda Maaliyadda.
Guddiga KMG ah ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka oo kulan la qaatay guddiga madaxbanaan ee doorashooyinka Qaranka